Ifama ye-15 imizuzu ukusuka eFlorence, i-wifi yasimahla
Ifama sinombuki zindwendwe onguGino
Emaphandleni, kufuphi neFlorence (i-15 min), iSiena kunye ne-Arezzo, ilele iFama yeFama "La Ripa", eTuscany, kwindawo emangalisayo yendawo yaseValdarno, i-Sunflower Apartment 110 sqm. ikhululekile kwaye ivulekile, ihonjiswe kwisitayile saseTuscan sezindlu zelizwe, Kukho amagumbi ama-2 anethuba lokuhlalisa abantu aba-2 ukuya kwaba-6. ikhitshi elikhulu, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela elineshawari.
Indlu yaseGirasole, ngaphakathi kwe-'Farmhouse La Ripa, imalunga ne-110 square metres ikhululekile kwaye ivulekile, inamagumbi amabini amakhulu, ikhitshi enkulu, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela elinye elineshawa.
Ukuhonjiswa kwesitayile saseTuscan, iisilingi zamaplanga, zenza umoya welizwe laseTuscan.
Ifama ikwithafa elisemdeni woMlambo iArno, nje ikhilomitha enye ukusuka kwilali, Incisa Val d'Arno. Indawo ilungele uhambo lokuphumla, nokuba ngebhayisekile okanye ngeenyawo. Yilungiselelo eligqibeleleyo labathandi bendalo kunye nobugcisa, njengoko likude ukusuka eFlorence (15 min.), Arezzo (30 min.) Kwaye uSiena (60 min.). U-Incisa usenokuyithanda indlu apho imbongi uFrancesco Petrarch wachitha ebuntwaneni bakhe kunye nolutsha.
Kwidolophu yaseIncisa eVal d'Arno sibandakanya: iivenkile ezinkulu, iibhanki, iposi, iindawo zokutyela. Abo bathanda ukuthenga, banokuthatha ithuba lezona ndawo zintsha zePrada, Gucci, Armani, Dolce kunye neGabbana, nje iikhilomitha ezi-3 ukusuka kwindlu yasefama. Kwiikhilomitha ezili-10 endaweni yokuqubha, iinkundla zentenetya, izitali zokukhwela, igalufa encinci, amachibi okuloba.
Gino, quasi laureato in agraria, innamorato della terra, è riuscito a far piacere questro lavora anche ad Antonella, che aveva studiato per fare la ragioniera. Insieme coltivano, s…
UGino, inkosikazi yakhe u-Antonella kunye nonyana wakhe uDavid baya kuba bekhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuze bakunike ulwazi malunga nommandla, iihambo zakho kunye nokunye.
Siza kukwazisa ngencasa yeemveliso zelizwe lethu, i-oli ye-olive enyulu, iwayini ebomvu kunye newayini emhlophe, iVin Santo, ubusi.
UGino, inkosikazi yakhe u-Antonella kunye nonyana wakhe uDavid baya kuba bekhona ngexesha lokuhlala kwakho ukuze bakunike ulwazi malunga nommandla, iihambo zakho kunye nokunye…